ရှည်သောဆံပင် 2018 ဘို့ဆုံးဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ခေါင်းဖီး - နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ခေတ်ရေစီးကြောင်း, သတင်း
ရာသီသစ်၏အရှိဆုံးဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေ၏ 45 ဓါတ်ပုံ - ရှည်သောဆံပင် 2018 ဘို့ဆံပင်ပုံစံတွေ
ဆံပင် - သဘာဝကပေးတဲ့ကိုမဆို Belle ၏စည်းစိမ်။ ရှုပ်ထွေးကျစ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆံပင်ပုံစံတွေ, တင်းကျပ်ထုပ် - အများကြီးမတူကွဲပြားမှုလိပ်ခေါင်း။ ရှည်သောဆံပင် 2018 ဘို့ဆံပင်ပုံစံတွေ - ရက်နှင့်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ဖို့အခြားအခွင့်အလမ်း။
ရှည်သောဆံပင် 2018 ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဘို့ဆံပင်ပုံစံတွေ
ကိုယ်ကသာပုံသဏ္ဍာန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်ပခုံးဓါးသွား malokreativnye, အောက်ကဆံပင်ပေါ်ဆံပင်ညှပ်ယုံကြည်ကြသည်။ ဤသည် အသွင်မြင်လာအောင် အောင်အောင်မြင်မြင်ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ 2018 ရှည်သောဆံပင်ကိုချိုးဖျက်:
ပြင်းထန်သောဆံပင်ဆံပင်ကောက်ကောက်အရုပ်ဆိုး SAG ဇာတ်စင်ကောင်းစွာ-ဆောင်ဖို့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုထောက်ပံ့ပေးစေသည်။ stylist အနည်းငယ်သော့ခလောက်တင်းကျပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ဆံပင်ညင်ညင်သာသာဆံပင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သည့်အခါ lank ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများဖြတ်, ပြားချပ်ချပ်နဲ့ဖြောင့်နှင့်အတူ laconic ဆံပင်အကြံပြုခဲ့သည်။
ဘန် - 2018 ခုနှစ်ရှည်လျားသောဆံပင်ပေါ်ဆံပင်ပုံစံတွေတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်း။
အချိုးမညီလိုင်းများ - အခြားကြောက်စရာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်။
အဆိုပါ elongated အ Bob Bob နဲ့ဖော်ပြကျော်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း။
Bang 2018 နှင့်အတူခေါင်းဖီးရှည်သောဆံပင်
, မကျြနှာကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်သင်၏မျက်စိမီးမောင်းထိုးပြ, အသက်နှစ်အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးဖို့တစ်ဦးကအကြီးလမ်း - က bangs ။ ကကြီးထွားလာနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သို့သော် Bang နှင့်အတူသစ်တစ်ခုဆံပင်ပေါ်စွန့, သငျသညျ, တစ်ဦးအလွန်အရေးပါခြေလှမ်းလုပ်နေပါတယ်:
အသစ်ကနှစျတှငျ Bang စောင်းစစ်ဆင်ရေးသို့ပြန်လာ။ သူတို့ကအနိုင်နိုင်ဟာမျက်ခုံးကိုရောက်ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုကိုဖုံးလွှမ်းရန်။
ထူသောဖြောင့် Bang, ရွေ့လျားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်, tapering မှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ သူတို့ကတစ်ဦးကိုတောင်ဖြတ်နှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်တွင်ရှည်သောဆံပင်အဘို့မိန်းမတို့ကိုရဲ့ခေါင်းဖီးများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။
Arched - တစ်ဦး elongated အ form မှာ pazhem နှင့်အတူအတော်လေးသဟဇာတဖြစ်သည့်အခြားဖက်ရှင်ဗားရှင်း။
Bang 2018 မပါဘဲရှည်သောဆံပင်ပေါ်ဆံပင်ညှပ်
တစ်ဦးပေါက်ကွဲသံကြီးများ၏မရှိခြင်း - မဟုတ်အမြဲတမ်းအားနည်းချက်။ ဒီဒြပ်စင် Play နှင့် levity ၏မျက်နှာကိုမှပူးတွဲပါသည်ဆိုပါကမပါဘဲဆံပင်ပုံစံတွေဟာဂန္ထဝင်ကြော့နှင့်များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ကြည့်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းတပ်ဆင်ဘို့လိုအပ်, မနှမြောဖို့သင့်စွန့်ပစ်ခြင်းမှာနံနက်အနည်းငယ်အပိုမိနစ်အောင်မရှိပါ။ အမျိုးသမီးဖက်ရှင်ဆံပင် 2018 ရှည်သောဆံပင်အမြဲဒီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအသေးစိတ်၏တည်ရှိမှုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Bob က, ကိုက်ရွေးချယ်စရာဇာတ်စင်အများစု အချိုးမညီသည့် Composition ၏ နဖူးပေါ်တိုတောင်းသောဆံပင်တစ်စီးရီးမပါဘဲအံ့မခန်းစုစုပေါင်းကြည့်။
ရှည်သောဆံပင် 2018 ဘို့ဆံပင်ပုံစံတွေအမျိုးအစားများ
သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံစံခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးသောအတိုင်းအတာအထိစတိုင်သော်လည်းမကောင်းစွာဆောင်ဖို့ကြည့်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အပြစ်အနာအဆာဖုံးကွယ်ခြင်း, ပြင်ပဒေတာကိုအလှဆင်, သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကိုအလေးပေး 2018. ရှည်သောဆံပင်ပေါ်ကမ္ဘာကဆံပင်ညှပ်တွေ့ဆုံရန်ကူညီပုံမှန်မဟုတ်သော, တောက်ပခြင်းရှိကြလော့။ ပြီးတာနဲ့ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ပါရမီ stylist ၏လက်၌တစ်ဦးယဉ်ငန်းအတွက်မီးခိုးရောင် mouse ကိုထဲကဖွင့်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိအသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှည်သောဆံပင်များအတွက်အမျိုးသမီးများခေါင်းဖီး 2017-2018 မတူညီကြပေမယ့်တူညီတဲ့သက်ရောက်မှု:
ရိတ်ဦးခေါင်း နှင့်ဝီစကီ - ၎င်း၏တောက်ပသောသဘောသဘာဝကိုဖော်ပြ non-အသေးအဖွဲနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆံပင်လန်းဆန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အဆငျ့ဆငျ့ကိုပေးသည်။ သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ပင်ပန်းတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာပြည့်စုံပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးစုစုပေါင်းအသွင်ပြောင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်ပါပဲ။ အမျိုးသမီးဖက်ရှင်ဆံပင် 2018 ရှည်သောဆံပင်၏အယူအဆတွင်ထည့်သွင်းသော keyword ကို - အထူးသဖြင့်အဆငျ့ဆငျ့သောကွောငျ့။ ယခုနှစ်တွင်စင်မြင့်တန်းအဆင့်အနည်းငယ် strands လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသာ 5-10 စင်တီမီတာ cutoff အထက်အတိုကောက်။
ဒီ installation ကို, ကိုအသုံးပြုခြင်း curly ဆံပင်, အရွယ်အစားအတွက်ပိုကောင်းအလတ်စားသို့မဟုတ်ကြီးမားသော, နှင့်ထိပ်ပေါ်မှာ, နှင့်အလယ်တန်းကနေဒါမှမဟုတ်ကြီးစွန်းမှာတည်ရှိပါတယ်မပေးပါ။ ခုနှစ်တွင် အကြားအစိတ်အပိုင်းများတည်နေရာ - ရှည်သောဆံပင် 2018 ၏အဘယ်အရာကိုဆံပင်ညှပ်အဆငျ့ဆငျ့ရှိသည်သောအင်္ဂါရပ်များ။ အဆိုပါမြိတ်ရုံမျက်ခုံးအောက်ရှေ့ဆက်သို့မဟုတ်ဖြောင့်ရွေးချယ်ဖို့ထင်လျှင်။
မှတ်မိလွယ်တဲ့ asymmetry - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၏လမ်းကြောင်းသစ်လက်ရှိရာသီအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသာငယ်ရွယ်ပြီးရဲဖက်ရှင်ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ရှည်သောဆံပင် 2017-2018 ပေါ်အချိုးမညီဆံပင်ပုံစံတွေအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တော်မူပြီးမှ, ရုတ်တရက်သင်တစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးကျနော်တို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းသစ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာမူကွဲတစ်ခုမှာ - ဦးခေါင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ဖက်အပေါ် non-ယူနီဖောင်းအရှည်။ နောက်ထပ်မရှိလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုဗားရှင်း - ထိပ်မှာတိုတောင်းသောဦးထုပ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အောက်ခြေ elongated အ strands ။ Asymmetry ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လျင်မြန်စွာအသွင်ကူးပြောင်းနှစ်ဦးစလုံးရှိနိုင်ပါသည်။
ရိတ်ဘုရားကျောင်း 2018 နှင့်အတူရှည်လျားသောဆံပင်
ဖက်ရှင်တခါတရံထူးထူးဆန်းဆန်းပုံစံများပေါ်ကြာပါသည်။ ဒီယဉ်ကျေးမှု၏ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဘုရားကျောင်းမှာဆံပင်ရိတ်ရလိမ့်မည်မှတပါးဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကြောင့်, ထိုမိန်းကလေးများသည်ဆိုပါစို့ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာတော့ 2018 ခုနှစ်ရှည်လျားသောဆံပင်ပေါ်ဤအကြောင်းစတိုင်ဆံပင် non-အသေးအဖွဲလတ်ဆတ်တဲ့ option ကိုဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ compound ဣတ္အရှည် strands နှင့်ရဲရင့် denuded ဘုရားကျောင်း - သာမန်သဘာဝသတ်သေပေါင်းစပ်။
တစ်ဦး ponytail သို့မဟုတ် Bun ဖွဲ့စည်းခြင်း, သင်တို့ရှိသမျှအားသာချက်ကိုသရုပ်ပြ နေတဲ့စတိုင်ဆံပင်ညှပ် ။ အဆိုပါအရည်ရွှမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ဖို့ Splayed ဆံပင်။ ရှည်သောဆံပင် 2018. အပေါ်မည်သည့်ဖက်ရှင်ဆံပင်အတွက်လိုက်ဖက်စွာပေါင်းစပ်ရိတ်ဝီစကီအဆိုပါ elongated စတုရန်း, လှေကား, bean ကို, ဇိမ်ခံအဆငျ့ဆငျ့ - ဆိုဗားရှင်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင်, အလှဆင်ခံခဲ့ရခံခဲ့ရစတိုင်အသေးစိတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
Long ကအနီရောင်ဆံပင်ညှပ် 2018
စုတ်ပြဲရေးစပ်သီပွင့်လင်းမျက်နှာဘွဲ့ရ, ပါးလွှာဆံပင်၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ရမ်းဆံပင်ကောက်ကောက် "မျက်တော်ကိုဖြေတတ်" ကိုခွင့်ပြုပါ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ဖို့ "အကျိုးသက်ရောက်မှုချိန်ညှိနေကြတယ်" ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းမကြာခဏကိုအသုံးပြုပြီးကိုအသုံးပြုပါ။ elongated အ bean ကိုအတွက် 2018 ရှည်သောဆံပင်စုတ်ပြဲ strands စိတ်ဝင်စားဖို့အပြောင်းအလဲ Hairstyle ။ pryadok ခြေလှမ်းများပါဝင်သည်ဟု Multilevel တပ်ဆင်ခြင်း, တောက်ပခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောလှပါတယ်။ အဆိုပါ nape ဆံပင်မှာအောက်ဆုံးထက်ပိုမိုတိုတောင်းသောအရာ Rhapsody, တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ဗားရှင်း။ စုတ်ပြဲ strands ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြပြီးတစ်ကြိမ်ဇာတ်စင်ဆိုပါတယ်ကြပြီမဟုတ်။
2018 Long ကဆံပင်ညှပ် foxtail
ခေါင်းပေါ်မှာလှပသောအသီးအရွက်များ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်တူရှိ fox အမြီးတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့မျိုးရပါလိမ့်မယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သဏ္ဌာန်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သည်နောက်ကျောသော့ခလောက်တစ်ခု V-shaped tapered ကြည့်နဲ့တကယ်တစ်ဦးအပြစ်သစ်တောအလှအပ၏အမြီးနဲ့တူရှိသည်။ ထိုသို့သောအမျိုးသမီးဆံပင် 2018 ရှည်သောဆံပင်မကြာခဏအကြာတွင်ဆှေးနှေးမညျသော gradient ကိုအရောင်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
ဆံပင်ဖြောင့်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပါးလွှာလျှင်, ဆံပင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တြိဂံအချပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အထူကပိုခက်ခဲ stacked ဆံပင်ပေမယ့် "အမြီး" ဟုစိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ရှိပါတယ်။ curly သရမ်းဆံပင်ကောက်ကောက် - ဆွဲဆောင်မှုရှိ fox အမြီးအရှုံးမပေးဖို့မအကြောင်းပြချက်! အထူးသဖြင့်အာဆင်နယ်အသင်း Rectifier တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ အကြောင်းမူကား, မကြာခဏအဆငျ့ဆငျ့နဲ့ပေါင်းစပ် foxtail ကျွမ်းကျင်, ရလဒ်အဆင်းလှသောအကျိုးသက်ရောက်သည်။
မူရင်း 2018 ရှည်လျားသောဆံပင်
ကမ္ဘာ၏ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမူရင်းမျက်နှာသာအတွက်ဂန္ပျင်းစရာကောင်းပုံကနေဝေးရွှေ့သင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆံပင်ချိန်ညှိ, သင်အံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ပါရမီဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း 2018 ခုနှစ် clients များဖန်တီးမှုရှည်လျားသောဆံပင်အားပူဇော်ဖို့အဆင်သင့်နေသောခေါင်းစဉ်:
Asymmetry - စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် regularity နှင့်လေးစားမှု။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းမှုလည်ပင်းသို့မဟုတ်နားရွက်ကြမ်းတမ်းဆံပင် strands နှင့်ဒုတိယအဆင့်ကိုပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်ရိတ်အဆငျ့ဆငျ့နဲ့အညီတစ်ဦးခြင်းကိုအထက်အဆင့်အထိပါဝင်သည်။
အဆိုပါဂန္ဆံပင်၏သခင်သည် core ကိုအရှည်ဆံပင်ဒါမှမဟုတ်အဆငျ့ဆငျ့အတွက်ရုတ်တရက်အကူးအပြောင်းအဆင့်အထိအဆိုပါမြိတ်၏ချွန်ထက်, Non-ကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်သည့်အခါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဗားရှင်း။
2018 ခုနှစ်တွင်ရှည်သောဆံပင်ပေါ်ခေတ်မှီဆံပင် Cesson အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ ဒါဟာစတိုင်ရန်လွယ်ကူသည်တိုက်ရိုက်အထူဆံပင်ပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောလှပါတယ်။ အဆိုပါဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြောင့်သာတိုတောင်းသောသို့မဟုတ်အလတ်အလျားအတှကျအသုံးပွုခင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။ အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော strands ဂရုတစိုက်နှင့်ညင်ညင်သာသာသူတို့နာခံမှုရှိရှိနေရာမှ၌အိပ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးထောင့်, မှာနှစ်ဖက်လျှောက်တွင်ထပ်ဆင့်, မျက်နှာဘဲဥပုံဘောင်။
ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း - ရှည်သောဆံပင် 2018 ရက်တွင်ဆံပင်ညှပ်
ယခုရာသီအတွက်မနိုင်လိမ့်မည်ဟု Key ကိုဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ပြီးသားစာရင်းဝင်ပြီ။ သို့သော်စတိုင်နဲ့ဆံပင်၏ကမ်ဘာပျေါမှာအတက်အကျကိုလိုက်နာသူကိုမိန်းကလေးများရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်ကြောင်းအရေးကြီးသောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်:
ဒီနှစ်မှာတော့တဦးတည်းဘက်မှာသူတို့ကို combing, ဆံပင်ဝတ်ဆင်ပြသနေသည်။ ထို့ကြောင့်, အနည်းဆုံးအားသင်အမြဲဒီထုံးစံ၌သင်၏လက်ဆံပင်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒီလမ်းအတွက်ဆံပင်ညှပ်ဖျော်ဖြေဖို့သင့်သခင်ကိုမေး။
အသွင်အပြင်နံရိုး Bang ၏မေးခွန်းတစ်ခုရှိလြှငျ, လှိုင်းလုံးများ၏မောက်အပေါ်ထားတဲ့နောက်တဖန်ယခုနှစ်ပြားသို့မဟုတ်ယင်း၏ဘက်မှာရှည်ဗားရှင်း, ကြိုက်တတ်တဲ့။ သူတို့သူ၏မျက်စိကျော်ကျဆင်းသွားကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့ကိုဝတ်ဆင်။
ကြီးမားတဲ့လှိုင်းတံပိုးကိုတင်သောရှည်သောဆံပင်လမ်းကြောင်းသစ် 2018 ရက်တွင်မဟုတ်, အထက်မှပေမယ့် Mid-အရှည်သို့မဟုတ်စွန်းမှဆံပင်ညှပ်အကြံပြုထားသည်။
ခေါင်းဖီးနဲ့ 2018 ခုနှစ်ရှည်လျားသောဆံပင်ပေါ်အရောင်
2018 ခုနှစ်တွင်ရှည်သောဆံပင်ပေါ်ဆုံးဖက်ရှင်ဆံပင်အစွန်းအထင်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်။ ဤသည်ကိုအသုံးပြုကျွမ်းကျင်စွာပင်အရိုးရှင်းဆုံးဆံပင်ပြောင်းလဲသည့်အခါအရာ, တောက်ပခြင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ဖက်ရှင်ကရိယာ balayazh နှင့်အတူအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆံပင် Cascading သောစွန်းတိုင်အောင်, တာဝန်ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးအရောင် strands ဖြစ်ပါတယ်။
Foxtail နှင့်လှေကားထိရောက်စွာ Sombra Ombre မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းအရောင်အကူးအပြောင်းအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောမတူညီသော။
Bob: မည်သည့်ရှည်လျားသောဆံပင် 2018 အတွက်အသုံးပြုအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအမြစ်များ Bob , အဆငျ့ဆငျ့, asymmetry ။
သာမန်ထက်အရောင် pixel - ရဲရင့်သဘောသဘာဝများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်။
သဲ, ပလက်တီနမ်, ပန်းရောင် - အမှန်တကယ်အဝါရောင်မရှိဘဲဖက်ရှင်ဆံပင်ရွှေရောင်အတွက်အရောင်။ သဘာဝလည်းအရောင်တွေ, ထိပ်၌ - ချောကလက်, ကြေးနီ, ကြေးဝါအရိပ်။ ခရမ်းရောင်, သန္တာ, အပြာ strands buntarok ၏ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်။
Naroscheny လက်သည်း 2013
Maxi ဆင်မြန်းနွေရာသီ 2013
ညဦးယံအချိန်စားဆင်ယင် 2018 - အလှဆုံးညနပေိုငျးဆင်မြန်းရာသီသစ်၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
အဝတ် 2016 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ထုတ်
ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ - Fall 2015
Twin-Set - Fall-ဆောင်းရာသီ 2016-2017
မိတ်ကပ် - နွေရာသီ 2015
တိုက်ခန်းထဲမှာပုရွက်ဆိတ် - တိုက်ခန်းအတွက်အိမ်ထောင်စုပုရွက်ဆိတ်တွေရဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများ
လေဆိပ်မှာယူ 30+ အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းဓာတ်ပုံများ
မုန်ညင်းနဲ့အတူ Pickling သခွားသီး
Candlemas - ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ထုံးတမ်းထာဝရဘုရား၏တင်ဆက်မှုမှာပြုသောအမှုမရနိုငျသလော
သငျသညျကိုတှေ့မွငျဖူးဘူးသောကြယ်ပေါင်း 30 ရှားပါးဓာတ်ပုံများ,
လသာဆောင်ပေါ်သခွားသီး - နှစ်ဦးစလုံးကောင်းတစ်ဦးသီးနှံရဖို့အာမခံချက်?